UXiaomi uvula iVenkile yakhe yokuqala eRomania | I-Androidsis
UXiaomi uyanda eYurophu ngokuvulwa kwesitolo sokuqala seMi eRomania
UXiaomi wavula iMi Store yakhe yokuqala eRomaniaNgokwenza njalo, kubonisa ukuba kuhlala kuyinyani kwizicwangciso zayo zokukhula ngakumbi eYurophu.
Ivenkile entsha yaseMi ikwiMega Mall, eBucharest, ikomkhulu lelizwe. Ukuvulwa okuzukileyo kwamkelwa ngobungangamsha obukhulu xa abalandeli abaninzi bohlobo lwabo beza kubona iimveliso ezazibonisiwe.
Ivenkile igcinwe kakuhle ngemveliso yeXiaomi engapheliyo, Ukusukela kwii-smartphones ukuya kwizincedisi zokuva, izithuthuthu zombane kunye nezixhobo zasendlini. Iimveliso zanikezelwa ngezaphulelo ezingakholelekiyo, ngakumbi ukuvuka kwangoko ababelindele ukuba kuvulwe ukuze babe ngabokuqala ukunyathela umgangatho wayo.
Ukusungulwa kweVenkile yeXiaomi Mi eRomania
Abathengi bokuqala abangama-50 babe nethuba lokuthenga Mi 3 Mix ye-2,199 lei (460 euros), isithuthuthu sombane Mi M365 ye-1,799 lei (380 euros) kunye ne I-Mi 8 Pro ye-2,099 lei (i-440 euro). Kanjalo kukho izibonelelo ezikhethekileyo kwiimveliso ezikhoyo de kube ngoMeyi 5.
Ngale ndawo intsha yenkampani, uXiaomi uzinzile njengomnye wabavelisi bee-smartphone ezivula iivenkile ezininzi emhlabeni. Isigantsontso sobuchwephesha sineeMi Stores ezininzi e-Itali, eSpain, eFrance, e-UK, eJamani, eRashiya nakwamanye amazwe, kwaye ukwanda kwenkampani yaseTshayina kubonakala ngathi kuyaqhubeka.
Siyathemba ukuba iivenkile ezininzi ziya kuqhubeka ukubonakala kwimozulu entsha kwiintsuku ezizayo. Nangona kunjalo, kufuneka sibonise ukuba iimveliso ezikhoyo kwiVenkile ye-Mi zigqithile kulindelo lwethu. Oku kunabela ngaphaya kwee-smartphones kunye nokubukela okuhle kwezinye izixhobo zekhaya, iibhayisekile zombane, phakathi kwabanye. Alithandabuzeki elokuba ukuthenga kwiVenkile ye-Mi ngamava ahluke ngokupheleleyo kunye nokuntywila, xa kuthelekiswa nokwenza kwi-intanethi okanye enye indlela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UXiaomi uyanda eYurophu ngokuvulwa kwesitolo sokuqala seMi eRomania
Ungasasaza njani iAudio kunye neVidiyo phakathi kwezixhobo ze-Android